ग्रान्ड ब्लू सीजन २ - प्रिमियर मिति - पालना दृश्य
by Dima XNUM Xrd जून312th जनवरी 2022
4 टिप्पणिहरु ग्रान्ड ब्लू सीजन २ मा - प्रिमियर मिति
ग्रान्ड निलो पक्कै पनि बाहिर एक अधिक हास्यास्पद एनिम रूपान्तरणहरु को एक हो, र जबकि कहानी वास्तव मा धेरै पदार्थ छैन र चुटकुले बिना यो आफ्नै मा खडा छैन यो अझै पनि सबै बाटो हेर्न धेरै मनोरञ्जनात्मक थियो। पागल अनुहारबाट सबै पात्रहरूले सौन्दर्य प्रतिस्पर्धा दृश्य तान्दै थिए मेरो अनुहार बन्द हास्दै। र म सजिलैसँग खुसी छैन।
यदि तपाईंले ग्रान्ड ब्लू अहिले सम्म हेरेको छैन र हेरेको विचारमा हुनुहुन्छ भने, कृपया अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईंसँग लुक्नको लागि केही छैन। म इमानदारीतासाथ यसको मतलब गर्दछु जब म भन्छु कि यो सब भन्दा मजाको एनिम हो जुन मैले अहिले सम्म देखेको छु। त्यसोभए के यस्तो श्रृंखला यति हास्यास्पद बनाउँछ? र किन यो प्रशंसकहरु बीच यति लोकप्रिय छ?
ग्रान निलो सीजन २ (शून्य-जी) बाट लिइएको
राम्रोसँग सुरू गर्नका लागि, यो एक धेरै राम्रो फारममा सचित्र छ, र मलाई यो सामान्य तरिकाले कोरिएको तरिका मनपर्दछ, तर के त्यसले यसलाई विषयगत रूपमा राम्रो श्रृंखला बनाउँछ? मेरो धारणामा यो केवल यो एक कारण हो जुन मलाई यो श्रृंखला मनपर्दछ र म वर्णन गर्दैछु किन एक सीजन २ सम्भव छ र यो पोस्टमा सम्भव छ। ग्रान्ड ब्लू को पहिलो सीजन २०१2मा रिलिज भएको थियो र मौसम २ हाम्रो सोच्ने तरिकामा ठीक छ। दुर्भाग्यवश ग्रान्ड ब्लूको कथा तपाईको सोचाइ जस्तो आकर्षक थिएन, यो डाइभि and र विशेष गरी डाइभि school स्कूलको वरिपरि घुम्छ।
तर के यो anime यती महत्वपूर्ण बनाउँछ र के यो अन्य समान anime देखि अलग खडा बनाउँछ? म भन्दछु कि चुटकुले कसरी सेट अप गरिएको छ र म्यानोरमा उनीहरू कार्यान्वयन हुन्छ। उदाहरणका लागि सौन्दर्य प्रतियोगिताको दृश्य लिनुहोस्, (यदि तपाईले ग्रान्ड ब्लू हेर्नुभयो भने तपाइँले मेरो मतलब के बुझ्नुहुनेछ) जुन मजेदार दृश्य मध्ये एक हो। 'कहिले एनिमेमा देखिएको छ, र केही कुरा भन्न थाल्छ। यदि तपाईंले पहिल्यै हेरिसक्नुभएको छैन भने, म तपाईंलाई पूर्ण सिफारिस गर्दछु।
ग्रान्ड ब्लूको सामान्य कथा मुख्यतया जापानको डाइभि school स्कूलको वरिपरि घुम्छ। यो जहाँ हामी हाम्रो मुख्य चरित्र को लागी परिचय छ लोरी किटहारा। लोरी एक जापानी विद्यार्थी हुन् जसले डाइभिंग सुरू गर्न चाहान्छन्। लोरी भनिन्छ स्कूल मा अर्को मानिस भेट्छन् कोउहेई इमामुरा, दुई एक अर्कालाई भेट्छन् र साथी बन्छन्। र बाँकी कथा लोरी र कोउही र मुख्य कथा यस्तै दुबैको एस्केडेडको वरिपरि आधारित छ। सुरुमा धेरै रोचक लाग्दैन तर एक पटक तपाईं यसमा प्रवेश गर्नुभयो तपाईं रिलिज गर्नुहुनेछ किन यो यस्तो राम्रो anime हो। ग्रान्ड ब्लूको कमेडी पक्ष भनेको के हो जुन यसले सबैलाई एकसाथ जोड्दछ, र यस श्रृंखलामा चार्टरहरू वातावरण र कमेडीक मान सिर्जना गर्न धेरै प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यद्यपि यस श्रृंखलाले हामीलाई लोरी र डाइभि school स्कूलमा पढ्ने अर्को महिलाको बिचको सम्बन्ध देखाउँदछ। चिसा कोटेगावा। यो श्रृंखलामा देखाईएको छ कि
चिसा शृंखलामा परम्परागत रूपमा आकर्षक महिलाहरू हुन् र उनको सधैं उनको रुचि कसको लागि हुन्छ भन्ने आँखा राखी रहन्छ, यद्यपि पछि यो कुरा प्रकट भयो कि उनको मुख्य चासो डाइभिivingमा छ, यो त्यहि हो जहाँ सबै पात्रहरूले उनीहरूको भिन्नतालाई अलग राख्दछन् र एकताबद्ध हुन सक्छन्। तर यसको छेउमा, ग्रान्ड ब्लूको मुख्य कथा भनेको माथि भनिएको छ, र त्यो तपाईंलाई वास्तवमै जान्नु आवश्यक छ। मलाई डाइविंगको संसारमा शृ .्खलाले विभिन्न पात्रहरू खोल्ने मार्ग मनपर्दछ, र यसरी उनीहरूले मलाई धेरै मनोरन्जन गरे। जे होस्, यो शो मा कमेडी हो कि सबै एक साथ राख्छ।
पहिलो बन्द छ लोरी कितुहारा, जापानको डाइभिंग स्कूलमा आउने निर्णय गर्ने एक विद्यार्थी। ऊ महिला, लि sex्ग र कामका बारे परम्परागत विचार राख्दछ, र रक्सीको आनन्द लिन्छ। मेरो विचारमा लोरी एकदम साधारण र तहको व्यक्ति जस्तो देखिन्छ, ऊ उसको अगाडि के चाहिन्छ, र राम्रो हृदय छ। यद्यपि उसको बेवकूफता केहि चीज हो जुन सम्पूर्ण श्रृंखलामा जारी रहन्छ र यो लोरीको बारेमा परिभाषित विशेषता हो जुन धेरैलाई माया गर्छ। उनी डाइभिंगमा चासो राख्नेमा खासै पहिलो देखिंदैनन् र यो तबसम्म मात्र छ जब चिसाले उनलाई फाइदा देखाउँदैन जुन उसले वास्तवमै महसुस गरी उसले आनन्द उठाउँदछ।
अर्को हो चिसा कोटेगावा जो जापानको लोरी जस्तो डाइभिंग स्कूलमा पनि जान्छ। पहिलो हेराईमा चिसा एक शान्त / लजालु व्यक्ति देखिन्छ जसले सार्वजनिक रूपमा उनको भावनाहरु अभिव्यक्त गर्दैन। उनी प्रायः दगुर्छन् जब कुनै परिस्थितिमा अप्ठ्यारो वा अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। लोरी जस्तै उनी पनि रमाइलो चरित्र होन तर मेरो विचारमा यो कहिलेकाँही बोरि .्ग हुन सक्छ। तथापि यो प्रकट गरियो कि उनको मुख्य रुचि विपरीत लि or्ग वा अन्य केहीमा होइन तर केवल डाइभिंगमा हो, र यो देखाईन्छ कि उनी धेरै प्रतिबद्ध छन् र गोताखोरीमा समर्पित छिन्। उनी लोरीको लागि डाइभिंग गर्नप्रति आफ्नो प्रेम समेत व्यक्त गर्छिन्, र यिनै कारणले गर्दा उनी पानीको डरलाई जित्न सफल भए।
अन्तिम तर कम्तिमा होइन कौहेइ इम्मुहारा जो लोरीसँग साथी छ, यद्यपि उनीहरूसँग धेरै समय लाग्छ। एक कथा POV को मामला मा, कोउहेई लोरीलाई उसको धेरै पलायनमा मद्दत गर्दछ र कहिलेकाँही ती सुरू गर्नेहरू हुन्। उहाँ पनि दुबै बीच एक पलटाव को रूप मा काम गर्दछ, र ती सबै जहिले पनि बहस, कहिलेकाँही लगातार, तिनीहरू अन्ततः आफ्नो दुबै लक्ष्यहरु लाई काम गर्न एक अर्कालाई समर्थन गर्न देखिन्छ। Kouhei एक धेरै रमाईलो र हास्यास्पद चरित्र हो, खास गरी जब उनी लोरीको साथ सम्मिलित हुन्छन्, र यसले ती दुईलाई एक हास्यपूर्ण जोडी बनाउँछ।
सबै सान्दर्भिक उप क्यारेक्टरहरू ग्रान्ड ब्लू मा चित्रित
मेरो विचारमा त्यहाँ चरित्र परिभाषित गर्ने वा उनीहरूलाई चाखलाग्दो बनाउने धेरै छैन, यो एक अर्कासँगको अन्तर्क्रियाले उनीहरूलाई हास्यास्पद बनाउँदछ र त्यसपछि रोचक बनाउँदछ। हामी हेर्छौं कि Kouhei, सधैं परिस्थितिहरु को लागी तर्कसंगत हुन को लागी प्रयास गर्दछ तर कहिलेकाहिँ उनी कहिले अन्त तर्कसंग शुरु गर्छन्। यसको आनन्द लिन तपाईले ग्रान्ड ब्लूको कथा मनपर्दैन, यद्यपि म तपाईंलाई वाचा गर्न सक्छु, यसको हास्य मूल्य पर्याप्त छ।
ग्रान्ड ब्लू सीजन १ (शून्य-जी) बाट लिइएको
सीजन २ का लागि उत्पादन २०१ season मा पहिलो सीजन पुनः प्रसारित हुने बित्तिकै सुरू भयो, र हामी निश्चित रूपमा भन्न सक्छौं कि अर्को सीजन एकदम टाढा छैन। प्रशंसकहरू र आलोचकहरूको साथ पहिलो सीजनको लोकप्रियता दिईएको खण्डमा त्यहाँ कुनै दोस्रो सीजन हुनेछ भन्ने कुरामा कुनै श .्का छैन। यो किनभने ग्रान्ड ब्लूले यसको हास्य मूल्य र चाखलाग्दो पात्रहरूको लागि उच्च प्रशंसा प्राप्त गर्‍यो। हामी निश्चित छौं कि यदि अर्को स्टूडियोले ग्रान्ड ब्लूको उत्पादन लिएन भने अर्को स्टूडियो हुनेछ।
यद्यपि, गत महिना यस वर्षको अवधिमा शून्य-जी (मूल एनिमेस अनुकूलनको उत्पादन कम्पनी) ले घोषणा गर्‍यो कि तिनीहरू COVID-१ p महामारीको कारण ग्रान्ड ब्लूको दोस्रो एनिमेस अनुकूलनको लागि उत्पादन बन्द गर्न वा ढिलाइ गर्ने वा ढिलाइ गर्ने घोषणा गरे। जबकि यो महान् छ जुन हामीलाई थाहा छ मौसम २ अवश्य आउँदैछ, यो लाजमर्दो कुरा हो कि यसले पहिलो एपिसोड प्रसारित हुन केही समय लिनेछ।
जीरो-जीको एक घोषणाले दाबी गर्यो कि ग्रान्ड ब्लूको आधिकारिक सीजन २ २०२० को बीचमा जुन जुन वा जुलाई महिनामा प्रसारित हुनेछ, यद्यपि यो उत्पादन ढिलाइका कारण यस बर्ष कुनै पनि समय हुन सक्छ। दुर्भाग्यवश, दुई हप्ता अघि शून्य-जीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो कि उत्पादन र त्यसकारण ग्रान्ड ब्लूको दोस्रो सत्रको रिलीज समय COVID-१ p महामारीका कारण ढिलाइ हुनेछ, जसले विश्वभरिका विभिन्न देशहरूलाई असर गर्दैछ। महामारीले अहिले पनि संयुक्त राज्य अमेरिका र ब्राजिल जस्ता देशहरूलाई प्रभाव पार्दै छ, तर यस्तो देखिन्छ कि जापान भाइरससँग राम्रोसँग हेरिरहेको छ। त्यसकारण हामी आशा गर्न सक्छौं कि ग्रान्ड ब्लूको नयाँ र लगातार दोस्रो सीजन २०२० मा ढिलो प्रसारण हुनेछ जस्तै अक्टुबरको रूपमा, वा २०२१ को सुरुमा, शायद जनवरीमा।
तर अहिलेका लागि हामीले भन्न सक्ने सबै छ। यदि तपाइँ हाम्रो ब्लग पढ्न रमाईलो गर्नुहुन्छ भने एनिमेस, र अन्य श्रृंखला जुन हामी कभर गर्न मन पराउँछौं अधिक जानकारी पढ्नको लागि कृपया हाम्रो साइट जाँच गर्नुहोस्। हामी हाम्रा पाठकहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन्छौं, र तपाईं यो पोष्ट मनपराएर वा यसमा टिप्पणी गरेर तपाईंको समर्थन देखाउन सक्नुहुनेछ। यससँग मिल्दोजुल्दो सामग्री छोटो आउँदैछ, रहिरहनुहोस्!
टैग: एनिमे animeblog ग्रान्डब्ल्यू grandblueanime grandbluenew grandblue रिलिज गरिएको ग्रान्डब्लु सिजन २ ग्रैंडब्लू सिजन दुई
१th जुन २०२० १२::24२ अपराह्न
राम्रो छ, धन्यवाद सीजन २ को लागि प्रतिक्षा गर्दै थिए!
दिमा जाखारोभ भन्छन्:
June जून २०२० बिहान :25::2020१
तपाईं आनन्दित हुनुहुन्छ, लोरी - ब्लग पोष्ट पृष्ठमा हाम्रो अन्य ब्लगहरू जाँच गर्नुहोस्।
१२1280० रोक्से भन्छन्:
तपाईं रमाईलो गर्नुभयो, ब्लग पृष्ठमा हाम्रो अन्य सामग्री जाँच गर्नुहोस् 🙂
अघिल्लो प्रविष्टि ब्ल्याक लगुन - किन सीजन4सम्भव छ, र समय यो प्रिमियर हुनेछ
अर्को प्रविष्टि तपाईंले उठाउनुभएको डम्बेलहरू कत्तिको भारी छन्? - सिजन २ प्रिमियर मिति + विचारहरू